kaydka, 19 October 2017
Khamiis 19 October 2017
Daalibaan oo weerar ku dishay 43 askari
Wasaaradda gaashnaadhigga Afghanistan ayaa sheegtay in ugu yaraan 43 askari la dilay kadib markii Daalibaan ay maanta weerar ku qaadeen saldhiga milatari oo ku yaalla koonfurta dalkaas.
Idaacadda Duhurnimo waxaad qeybta hore ku maqli kartaa wararka ugu waaweyn ee Soomaaliya iyo Caalamka. Qeybta danbe ee idaacaddu waxay idiin soo gudbinaysaa barnaamijyo ku saabsan dhalinyarada maanta.
Halkaan ka dhageyso warbixinta Xuseen Zaxnuuni kasoo diray Qahira
Qaahira: Baroordiiq loo sameeyay dhibbanayaashii Muqdisho
Kulan baroorqiid ah oo ay Soomaalida ku nool Masar ku muujiyeen sida ay uga xunyihiin weerarki 14-ki October ka dhacay Muqdisho ee lagu lagu laayay ku dhawaad 300 oo ruux oo Soomaali ah, ayaa xalay ka dhacay safaarada Soomaaliya ee magaalada Qahira.
Idaacadda Subaxnimo ee Saaka iyo Caalamka waxaad ku maqashaa wararkii habeenimadii xalay ka dhacay Soomaaliya iyo waliba caalamka, barnaamijyo, wareysi xiiso leh, ciyaaraha, dhanbaallada dhagaystayaasha iyo waliba wargeysyada caalamku waxay saaka ku waabariisteen.
Tillerson: Waan la xisaabtami doonnaa milatariga Myanmar
Xoghayaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson ayaa Arbacadii sheegay in gaboodfallada dalka Myanmar loogu geystay muslimiinta laga tirada badanyahay ee Rohingya ay mas,uuliyaddeeda qaadi doonaan hogaanka millatari ee dalkaasi.
Barca, Bayern, PSG Iyo Juve oo Wada Badiyay
Waxaa xalay dhacay kulamo kale oo ka tirsanaa wareega koowaad ee koobka kooxaha horyaalada Yurub Uefa Champions League.
Ronald Koeman: Kalsooni ayay Kooxda Igu Qabtaa
Tababaraha kooxda Everton Ronald Koeman, ayaa sheegey in uu kalsooni buuxda uu ku qabo maamulka kooxda, inkastoo ay si aan wanaasagneyn ku billowdeen xilli ciyaareedkan.
Wareysi: Cumar Cabdirashiid
Cumar Cabdirashiid ayaa ka hadlaya qaraxii Muqdisho iyo baaq kasoo yeeray madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Dhageyso Madaxweynaha Jabuuti oo Ka hadlay Qaraxii Soobbe
Dhageyso Wareysiga Reysal wasaarihi hore Cumar Cabdirashid
Idaacadda Fiidnimo ee Evening Edition waxaad ku maqashaan wararkii ugu danbeeyey ee Soomaaliya iyo Caalamka, barnaamijyo iyo wareysiyo ka turjumaya dhacdooyinka waqtigaasi ka dhacaya daafaha Dunida.